CAD for Myanmar: June 2010
2D-05: Object Snaps ရဲ့အသုံး ၀င်ပုံများ
OSNAP (Object Snaps) ဆိုတာ ကျနော်တို့ Drawing တွေဆွဲတဲ့အခါ ပိုတိကျဖို့အတွက် အသုံးတော်တော်ဝင်ပါတယ်။ လွယ်လွယ် ပြောရရင်တော့ အလိုရှိတဲ့နေရာတွေကို ဇပ်ကနဲ၊ ဇပ်ကနဲ ခုန်သွားနိုင်စေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Object Snaps တွေက Command Line မှာတိုက်ရိုက်သုံးလို့မရဘူးနော်။ Command တခုခုအောက်မှာ အထောက်အကူပြုအနေနဲ့ပဲ သုံးလို့ရတာပါ။ ဒါတွေကတော့ Endpoint, Midpoint, Center, Node, Quadrant, Intersection, Extension, Insertion, Perpendicular, Tangent, Nearest, Apparent intersection နဲ့ Parallel တို့ပါပဲ။
1. Endpoint, 2. Midpoint, 3. Center point, 4. Quadrant
ကျနော် အပေါ်ကပြထားတဲ့ ပုံကိုကြည့်ရင် Line တခု၊ Arc တခုမှာဆို Endpoints နှစ်ခုရှိနေမယ်။ အလယ်မှာ Midpoint တခုလဲရှိမယ်။ စက်ဝိုင်းတခုဆိုရင် အလယ်မှာ Center တခုနဲ့ Quadrants လေးခုရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ဘာတွေရှိသလဲ ကြည့်ကြရအောင် . . . ။
Command Line: OSNAP (Enter)
Menu Bar: Tools > Drafting Settings > Object Snap Tab ဆိုဝင်လိုက်ရင် အောက်က Dafting Settings ဆိုတဲ့ Dialog Box ကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒါမှမဟုတ် Status Bar ပေါ်က OSNAP Button ပေါ်မှာ Right Click ပေးပြီး Setting . . . နဲ့ဝင်လဲ ရပါတယ်။
ကျနော်တို့ အသုံးပြုလိုတဲ့ Object Snaps တွေကို ဒီ Dialog Box မှာ Check လုပ်ပြီးရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဘယ်ဖက် အပေါ်နားက Object Snap On (F3) ဆိုတာလေးလဲ Check လုပ်ဖို့ မမေ့ခဲ့နဲ့နော်။ မေ့ခဲ့ရင် F3 ကိုနှိပ်ပြီး ON/OFF လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ON ထားရင် ကျနော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ Object Snaps တွေအကုန်သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး OFF ထားရင်တော့ တခုမှသုံးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လောဘတကြီးနဲ့ အကုန်လုံးလဲ မရွေးထားနဲ့နော်။ အသုံးဝင်တာမှန်ပေမယ့် တခါတလေမှာ မလိုလားအပ်တဲ့နေရာတွေ သွားသွား ဖမ်းနေလို့ စိတ်ညစ်ရတာလဲ ကြုံရပါလိမ့်မယ်။
Object Snap Tracking On (F11) ကိုယူထားမှလည်း ကျနော်တို့ရဲ့ Object Snaps တွေကနေ ခြေရာခံလို့ရပါလိမ့်မယ်။
Object Snap Toolbar ကိုဖွင့်ထားရင်တော့ Buttons တွေပေါ် Mouse Pointer တင်လိုက်ရင် Tool-tips တွေထွက်လာလို့ ဘယ်ဟာက ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ နောက်တော့လဲ ရင်းနှီးသွားရင် အလွတ်ရသွားမှာပါပဲ။
အရင် Versions အနိမ့်တွေတုန်းကတော့ Command Line မှာပဲ ရိုက်ထဲ့ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်း Versions တွေမှာတော့ တခါတည်း တန်းပြီး Drafting Settings Dialog Box ထဲတန်းရောက်သွားတာပါ။ Version အမြင့်နဲ့ Command Line သုံးချင်သပဆိုရင်တော့ အခုလိုသုံးကြည့်ပါ။
Command: -OSNAP (Enter)
Current osnap modes: End,Cen,Node,Quad,Int,Ins,Perp,Tan,Ext,Par
ဆိုပြီး လက်ရှိ ON ထားတဲ့ Object Snap Modes တွေကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
Enter list of object snap modes: မှာကိုယ်ထပ်တိုးလိုတဲ့ Modes တွေရဲ့ First3Characters ကို Comma (,) ခံပြီး တန်းစီ ရိုက်ထဲ့လိုက်လို့ ရပါတယ်။ ဥပမာ - Endpoint, Quadrant, Tangent ကိုလိုချင်ရင် end,qua,tan လို့ရိုက်လိုက်ရင် ရပြီပေါ့။ ထူးခြားတာကတော့ Mid Between2Points ကိုလိုချင်ရင် M2P လို့ရိုက်ရပါတယ်။
-OSNAP မဟုတ်တဲ့ Command တခုခုရဲ့အောက်မှာ ရိုက်ပြီးသုံးတာက ခဏတာ Overwrite လုပ်ပြီးသုံးတာပါ။ တကြိမ်ပဲ သုံးလို့ ရလိမ့်မယ်။ ဒီလိုရိုက်ပြီးသုံးရတာ အဆင်မပြေဘူးတဲ့လား။ Drawing Area ထဲမှာ Shift + Right Click ကိုသုံးရင် အောက်မှာ ဖော်ပြထားသလို Object Snaps Short-cut List လေးပေါ်လာမှာပါ။ အဲဒီအထဲကမှ ကိုယ်အလိုရှိတာကို Click လုပ်ပြီး ရွေးချယ် သုံးလဲ ရပါတယ်။
ပုံမှာမြင်နေရသလို Object Snaps တွေကိုဖော်ပြတာဟာ တခုနဲ့တခု မတူတာကို သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ အောက်ကပုံလေးတွေကို လေ့လာကြည့်ပါ။
Endpoint ဆိုတာ Arc, Elliptical Arc, Line, Multiline, Polyline segment, Spline, Region, Ray, Trace, Solid, 3D face တွေမှာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ Ends ကနှစ်ဘက်ရှိတတ်တာကြောင့် ကျနော်တို့ Object ရဲ့ Midpoint ကနေ Mouse Pointer နဲ့အနီးဆုံး End ကိုဖမ်း ပေးမှာပါ။
Midpoint ကတော့ Arc, Elliptical Arc, Line, Multiline, Polyline segment, Region, Solid, Spline, xline တို့မှာ ရှိပါတယ်။ တခုတည်းဆိုတော့ ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူး။
Intersection ကိုတော့ နောက်မုာဖော်ပြထားတဲ့ Objects နှစ်ခု တခုကိုတခုကဖြတ်သွားရင် တွေ့ရမှာပါ။ Arc, Circle, Ellipse, Elliptical Arc, Line, Multiline, Polyline, Ray, Region, Spline, Xline တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Extension ကတော့ End တဘက်ကနေ Mouse Pointer ကိုတင်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲလာရင် Extension Line ကို Dotted Line နဲ့ မြင်လာရမယ်။ End ရဲ့အပြင်ဘက်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ အတွင်းဘက်မှာဖြစ်ဖြစ် Extension Line ပေါ်က အမှတ်တခုကို ဖမ်းမှာပါ။
Center ကိုတော့ Circles, Arcs, Ellipses တွေမှာ သုံးပါလိမ့်မယ်။ Center ကိုအတင်းမကပ်ပဲ “စက်ဝန်း”ပေါ်တင်လိုက်လဲ ရပါတယ်။
Quadrant ကို Circle, Arc, Ellipse တွေမှာပဲ ရှာတွေ့နိုင်၊ သုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Tangent ဆိုတာ Circle, Arc, Ellipse, Elliptical Arc, Polyline Arc Segment,Spline တွေပေါ်ကို တနေရာက Line တခုလာပြီး Tangent ထိအောင်ဆွဲတဲ့အခါမှာ သုံးပါတယ်။ ပြင်ပအမှတ်တခုကနေဆွဲလို့ တခါတလေမှာ နှစ်နေရာ Tangent ဖြစ်နိုင်တာရှိတတ်လို့ သတိထားပြီး ဖမ်းစေချင်ပါတယ်။ ဒီ Osnap ကိုပထမဆုံး “စ”သုံးလို့မရဘူးနော်။
Perpendicular ကတော့ ထောင့်မှန်ကျနိုင်တဲ့ Arc, Circle, Ellipse, Elliptical Arc, Line, Multiline, Polyline, Ray, Region, Solid, Spline, Xline တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Parallel ကိုတော့ အပြိုင်ဆွဲဖို့ သုံးပေမယ့် ကျနော်တော့ Offset Command ကိုပိုသုံးဖြစ်ပါတယ်။
Node ကတော့ Point, Dimension Definition Point, Dimension Text Origin တွေမှာ ဖမ်းလို့ရပါလိမ့်မယ်။
Insertion ကိုတော့ Attribute, Block, Shape, Text တွေမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။
Nearest ဆိုတာ Arc, Circle, Ellipse, Elliptical Arc, Line, Multiline, Point, Polyline, Ray, Spline, Xline တွေပေါ်မှာ ဖမ်းလို့ရပါတယ်။ အားလုံးထဲမှာ တိကျမှုမရှိဆုံးလို့ ပြောလို့ရပေမယ့် အောက်မှာဖော်ပြထားသလို Cross-hair ရဲ့ Intersection Point ကနေ Object ပေါ်ကို Perpendicular ချပြီး Point ကိုဖမ်းပေးလို့ အများကြီး နီးစပ်တယ်လို့တော့ ပြောနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဆိုတော့ ဒါကိုသုံးမယ်ဆိုရင် Object နဲ့ကပ်နိုင်သမျှကပ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
(Cross-hair ရဲ့ အလယ်မှာ ရှိတဲ့ Box လေးကို Aperture Box လို့ခေါ်ပြီး Object တခုခုကို Select လုပ်မယ့်အခါ Cross-hair ပျောက်သွားပြီး မြင်နေရတဲ့ Box ကိုတော့ Pick Box လို့ခေါ်ပါတယ်။)
Extended Intersection ဆိုတာက တခုနဲ့တခု တကယ်ဖြတ်ကြတာ မဟုတ်ပဲ ဆက်ဆွဲမှ ဆုံနိုင်မယ့် Intersection ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျား စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး ဒီ Osnap ကိုဖမ်းရလိမ့်မယ်။ ကျနော် ပုံမှာပြထားသလို Line တခုရဲ့ End ကနေ ဖြည်းဖြည်းလေးဆွဲလာ။ Dotted Line နဲ့ Extension ပေါ်လာမှ နောက်တလိုင်းရဲ့ End ကနေ Extension Line ကိုထပ်ဆွဲလာ။ ပထမ Dotted Line ပျောက်သွားလို့ စိတ်မပူနဲ့။ AutoCAD ကမှတ်ထားတယ်။ အဲဒီ Dotted Lines နှစ်ခုဆုံနိုင်တဲ့နေရာရောက်ရင် နှစ်လိုင်းလုံးလဲ မြင်ရမယ်။ Intersection Point လေးလဲ မြင်ရမှ Click လိုက်တော့။ ဟူး . . . အဆင်မသင့်ရင် နှလုံးရောဂါ ရနိုင်တယ်ဗျ။
Apparent Intersection ကိုတော့ 3D ဆွဲတဲ့အခါမှာ သုံးပါတယ်။ Plane မတူတဲ့ Objects တွေ တကယ်မဖြတ်ပဲ ဖြတ်သယောင်ရှိတဲ့ Point ကိုဖမ်းတာပါ။ ဒီ Feature ပါလာကတည်းက ကျနော်ဖမ်းတာ အခုထိ လိုချင်သလို ဘယ်တော့မှ မမိလို့ ကျနော်တော့ မသုံးဘူး ဆိုတာ ၀န်ခံပါရစေ။ ခင်ဗျားကြိုးစားကြည့်ရင်တော့ ကြည့်ဗျာ။ Extended Intersection ထက်နှလုံးရောဂါ ပိုရနိုင်ပါတယ်။
Mid Between2Points ကတော့ အပေါ်က Osnaps တွေသုံးပြီး ဖမ်းလို့ရတဲ့ Points နှစ်ခုကြားက Midpoint ကိုဖမ်းတာပါ။
From ကတော့ Extension Line ပေါ်ကမဟုတ်ပဲ Point တခုကနေ ရည်ညွှန်းပြီး ဖမ်းတဲ့အခါ သုံးပါတယ်။
အခုလောက်ဆို Object Snaps တွေအကြောင်း တော်တော်လေးသိပြီး အသုံးချနိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေကို လေ့လာထား၊ သိထားတော့ နောက်ကျနော်တင်မယ့် Posts တွေကို ကျနော်နဲ့အတူတူ လိုက်လုပ်နိုင်မှာပါ။
Posted by WISE GUY at 3:48 AM 1 comments Links to this post
2D-04: Basic Drawing Commands (Rectangle, Circle, Polygon)
ကျနော်အရှေ့က 2D-03၊ AutoCAD Basic Concept & Data Input မှာ AutoCAD အခြေခံနဲ့ Data ဘယ်လိုသွင်းမလဲဆိုတာ ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခုတော့ အခြေခံအကျဆုံး Commands တွေဘယ်လို အသုံးချကြမလဲ ဆိုတာဆက်လေ့လာကြပါစို့ . . . ။
2D-03 မှာ Line Command အကြောင်းပြောခဲ့ပြီး Rectangle တခုကို ဆွဲကြည့်ခဲ့ကြတယ်နော် . . . ။ အခု Rectangle Command ကိုသုံးတဲ့အခါကျတော့ Diagonal Points နှစ်ခုကို ပေးရုံနဲ့ ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ တတန်းတည်း မဟုတ်တဲ့ အမှတ်နှစ်ခုကို သိတဲ့အခါ ကျန်တဲ့နှစ်မှတ်ကို တွက်နိုင်လို့ ဆွဲပေးတာပါ။ အရင် Version အနိမ့်တွေတုန်းက ဆွဲလို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
Menu: Draw > Rectangle
Ribbon: Home tab > Draw panel > Rectangle
Command: RECTANGLE (or) RECTANG (Enter)
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Drawing Area ထဲက တနေရာရာမှာ Click ပေးလိုက်ပါ။
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: Mouse ကိုနည်းနည်းဆွဲပြီး တခြားနေရာမှာ Click ပေးလိုက်ပါ။ ကျနော်တို့က Default အတိုင်းပဲလိုက်ပြီး Specify first corner point နဲ့ Specify other corner point ကိုပဲပေးပြီး ဆွဲလိုက်တာပါ။
2D-03 တုန်းက Line Command နဲ့ဆွဲကြည့်ခဲ့တဲ့5x4Rectangle ကိုပြန်ဆွဲကြည့်ရအောင် . . .
Command: RECTANG (Enter)
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @5,4 (Enter)
အရင် Line Command သုံးတာထက် ပိုလွယ်သွားပါတယ်။ အစကတည်းက လွယ်တာမပြောဘူးဆိုပြီး ရွှေစိတ်တော် မညိုပါနဲ့အုန်းဗျာ . . . ။
Chamfer နဲ့ Fillet Options တွေကို ကျနော် ဒီ Commands တွေပြောပြီးမှ ပြန်ပြောပါ့မယ်။
Elevation က 2D ဆွဲတဲ့သူအတွက် မလိုပါဘူး။ 3D သမားအတွက်ကျတော့ Default အတိုင်းဆွဲရင် Z-Zero Plane မှာဆွဲမှာပါ။ ဒါကို မလိုချင်တဲ့အခါ၊ Z Level တခုမှာဆွဲချင်တဲ့အခါ သုံးမှာပါ။
Thickness ကလည်း 3D ဆွဲတဲ့အခါ အထူတခုနဲ့ဆွဲချင်တဲ့အခါ သုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Thickness Option နဲ့ဆွဲတာက Solid မဟုတ်ဘူးနော်။ နံရံလေးဘက် တက်သွားတဲ့သဘောပါပဲ။
Width တခုနဲ့ဆွဲတာကတော့ Ployline ကို Width တခုထားဆွဲတာနဲ့ သဘောချင်းတူပါတယ်။
ဒုတိယ Prompt Line မှာ -
Area တခုကိုသိရင် ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Area ကိုသိတော့လည်း Base on Length လား Width လား ထပ်မေးပါလိမ့်မယ်။
Dimensions ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း Length နဲ့ Width ကိုပဲ ပေးရပါလိမ့်မယ်။
Rotation ကိုသုံးပြီးဆွဲတဲ့အခါ Default အတိုင်း Horizontal & Vertical Position မဟုတ်ပဲ စောင်းနေတဲ့ Rectangle ကို ဆွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Rectangle တခုကို Rectangle Command နဲ့မဟုတ်ပဲ Line Command နဲ့ဆွဲလဲရပါတယ်။ ဘာကွာလို့လဲဆိုတော့ Line Command ကိုသုံးပြီးဆွဲတဲ့ Rectangle မှာ Objects လေးခုရှိပြီး Rectangle Command နဲ့ကျတော့ တခုပဲရှိပါလိမ့်မယ်။ Mouse Pointer တင်ကြည့်လိုက်ရင် သိသာပါတယ်။ Save လုပ်ပြီးကြည့်ရင်လဲ Objects အရေအတွက် နည်းတဲ့ File က Size ပိုငယ်ပါလိမ့်မယ်။ File Size နည်းလေ၊ ကောင်းလေပါပဲ။
အခု Circle Command ကိုဆက်လေ့လာကြရအောင် . . .
Menu: Draw > Circle > Center, Radius
Ribbon: Home tab > Draw panel > Circle
Command: CIRCLE (Enter)
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Drawing Area ထဲက တနေရာရာမှာ Click ပေးလိုက်ပါ။
Specify radius of circle or [Diameter]: Mouse ကိုနည်းနည်းနေရာလေးရွေ့ပြီး Click ပေးလိုက်ပါ။ အခုဆိုရင် စက်ဝိုင်းတခုကို လွယ်လွယ်ဆွဲတတ်သွားပါပြီ။
Specify center point for circle က Default ပါ။ [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] ကတော့ Options ပြောင်းချင် ပြောင်းနိုင်အောင် ပေးထားတာပါ။ 3P (3 Points) နဲ့ဆွဲမလား။ 2P (2 Points) ကတော့ သချာင်္သဘောမှာ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် Diameter ရဲ့ Ends တွေသိရင် ဆွဲနိုင်တယ်လို့ နားလည်ရမှာပါ။ Ttr (Tangent, Tangent, Radius) နဲ့ဆွဲမလား စသဖြင့် ရွေးချယ်ခွင့်တွေ ပေးထားပါတယ်။
ပထမ Click ပေးပြီးချိန်မှာ Mouse ကိုနေရာရွေ့လိုက်ရင် တန်းလန်း၊ တန်းလန်းနဲ့ Radius ဘယ်လောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့ Dynamic Input ကိုမျက်စေ့နောက်ရင် အောက်က Status Bar က DYN (Dynamic Input) ဆိုတဲ့ Button လေးကို နှိပ်ပြီးဖျောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ Button ကလဲ Toggle ON/OFF ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပထမပေးထားတဲ့ Point နဲ့ ဒုတိယပေးလိုက်တဲ့ Point ရဲ့ Distance ကို AutoCAD က Radius တန်ဖိုးလို့ နားလည်သွားပြီး စက်ဝိုင်း တခု ဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒုတိယ Prompt မှာ Specify radius of circle က Default ဖြစ်ပြီး ဒီမှာလဲ Diameter ပြောင်းချင်ရင် ပြောင်းနိုင်အောင် Option အနေနဲ့ ပေးထားပါတယ်။
ကျနော်တို့က အတိအကျဆွဲချင်တဲ့အခါ တန်ဖိုးအတိအကျ ရိုက်ထည့်ပေးရပါ့မယ်။ Circle တခုကို ဆွဲနိုင်တဲ့ Options တွေကတော့ -
2 Points (Diameter ရဲ့ Ends တွေကို ပေးရပါ့မယ်။)
3 Points (တဖြောင့်တည်းမဟုတ်တဲ့ သုံးမှတ်ဖြစ်ရပါ့မယ်။)
Tangent, Tangent, Radius (ပေးတဲ့ Radius ဟာဖြစ်နိုင်တဲ့ တန်ဖိုးမဟုတ်ရင် ဆွဲမပေးနိုင်တာ သတိပြုပါ။) နဲ့
Menu ကယူရင် Tan, Tan, Tan ဆိုပြီ3းTangents နဲ့ပါ ဆွဲလို့ရတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
တစုံတခု Input ပေးတာမှားသွားလို့ ဘယ်နေရာပဲရောက်နေရောက်နေ Esc (Escape Key) ကိုနှိပ်ရင် လက်ရှိနေရာကနေထွက်ပြီး Command Line ကိုပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
Spacebar ရယ်၊ Enter ရယ်၊ Mouse ရဲ့ Right Button ရယ်ဟာ အတူတူပဲဆိုပေမယ့် နေရာတိုင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ - Text ရိုက်တဲ့ အခါမျိုးမှာ မရနိုင်ပါဘူး။
F1 ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း Help ပါ။
F2 က သုံးကြောင်းတည်း မြင်နေရတဲ့ Command Line ကိုအားမရတဲ့အခါ Text Screen ဘက်ကိုသွားဖို့၊ တနည်းပြောရရင် Text Screen နဲ့ Graphic Screen ကိုကူးပြောင်းပေးတဲ့ Toggle Function Key တခုဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်အခုအချိန်မှာ Toolbar, Menu Bar, Ribbon, Command Line တွေပြောနေပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော် Command Line ကိုအဓိကထား ပြောပါ့မယ်။ ခင်ဗျားသန်ရာ၊ သန်ရာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သိပ်ရှည်တဲ့ Command လိုမျိုးကျမှ Menu ကိုအဓိကထား ပြောပါ့မယ်။ ဥပမာ - Dimension တပ်တဲ့အခါမျိုးပေါ့။ ဒီလောက်ဆိုရင် Circle ဆွဲတတ်ပြီထင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း Tutorial တွေကျတော့ ကျနော်နဲ့အတူတူ လိုက်ဆွဲကြတာပေါ့။
ကျနော်နဲ့အတူတူ Radius2unit ရှိတဲ့ Circle လေးနှစ်ခုဆွဲလိုက်ပါ။
Menu: Draw > Polygon
Ribbon: Home tab > Extended Draw panel > Polygon
Enter number of sides <4>:5(Enter)
လေးနားဆိုရင် Rectangle နဲ့မထူးမှာစိုးလို့ ငါးနားပြောင်းယူလိုက်တာပါ။
Specify center of polygon or [Edge]: ပထမ Circle ရဲ့ Center ကိုရွေးပါ့မယ်။ OSNAP ကိုလိုရင် ON လိုက်ပါ။ အောက်က Status Bar ပေါ်မှာရှိပါတယ်။ (Default အတိုင်းဆိုရင် Center Point လဲရွေးပြီးသား၊ OSNAP လဲ ON ပြီးသားပါ။) Center ဆိုပြီး လောဘတကြီးနဲ့ Center ဆီအတင်းသွားစရာ မလိုပါဘူး။ စက်ဝိုင်းရဲ့ “အ၀န်း”ပေါ် Mouse Pointer တင်လိုက်တာနဲ့ Center ကိုဖမ်းလို့ ရပါတယ်။ ကျနော်နောက်တော့ OSNAP (Object Snap Modes) တွေအကြောင်း ရှင်းပါ့မယ်။ အခုတော့ ခဏ သည်းညဉ်းခံလိုက်ပါ။
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: (Enter)
Default အတိုင်း Inscribed ကိုယူပါတယ်။
Specify radius of circle:2(Enter)
နောက်တခါထပ်ပြီး Polygon ဆွဲဖို့ Command ရိုက်ရမှာ ပျင်းနေပြီလား။ Enter or Spacebar သာခေါက်လိုက်ပါ။ Previous Command ပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်။ ကပ်ရက်ပဲရမယ်နော်။ တခြားသုံးခဲ့တာတွေရော မရနိုင်ဘူးလားပေါ့။ စိတ်မပျက်နဲ့အုန်း။ Command Prompt Area ထဲ Mouse Pointer လေးထည့် Right Click ပေးလိုက်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ Short-cut Menu ရဲ့ အပေါ်ဆုံးက Recent Commands ကိုသွား Click လိုက်ရင် ကျနော်တို့ နောက်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့ Commands ခြောက်ခုကို မှတ်ထားတာ တွေ့ရပါ လိမ့်မယ်။ ဒီတော့ နည်းနည်းကျေနပ်သွားပြီပေါ့။ ခြောက်ခုတည်း မှတ်ပေးတာ နည်းတယ်မထင်ပါနဲ့။ RAM Memory စားလို့ ဒီလောက်ပဲ မှတ်ပေးတာပါ။ ဒါကိုဘယ်လို ပြင်မလဲဆိုတာ နောက်တော့ပြောပါ့မယ်။ Keyboard ပေါ်က Up Arrow, Down Arrow Keys တွေနဲ့လဲ Command History ကိုပြန်ခေါ်ပြီး လိုတာတွေ့ရင် Enter ခေါက်ပြီးသုံးလဲရပါတယ်။
Enter number of sides <5>: (Enter)
စောစောက သုံးခဲ့ဘူးတဲ့တန်ဖိုး5ကို Default အနေနဲ့ မှတ်ထားတာ သတိထားမိမှာပါ။
Specify center of polygon or [Edge]: နောက် Circle တခုရဲ့ Center ကိုဖမ်းပါ။
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: c (Enter)
အခုဆွဲပြီးသွားတဲ့ Polygon နှစ်ခုကို ပြန်လေ့လာကြည့်ရင် Radius ချင်းတူပေမယ့် Inscribed နဲ့ Circumscribed ကွာတာ သတိထားမိမှာပါ။
တကယ်ကတော့ Circle ဆွဲစရာမလိုပါဘူး။ ကွာတာကို ယှဉ်ကြည့်နိုင်ဖို့ အရင်ဆွဲထားတာပါ။
Inscribed မှာ Radius ဟာ Center နဲ့ Polygon Corner ကြားအကွာအဝေးပါ။ Circumscribed မှာတော့ Center ကနေ Polygon Edge ပေါ်ချတဲ့ ထောင့်မှန်ကျ အကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ တခုသတိထားမိစရာက အနားအရေအတွက်ကို “စုံ” ထားရင်မသိသာ ပေမယ့် “မ”ထားတဲ့အခါ အမြဲတမ်း အောက်ခြေအနားဟာ ရေပြင်ညီ ဖြစ်နေပါတယ်။
Edge Option နဲ့လဲဆွဲနိုင်ပါတယ်။ Polygon တခုရဲ့ အနားအလျားကို သိတဲ့အခါ ဆွဲမှာပါ။ Regular Polygon ပဲ ဆွဲနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် အနားတခုသိရုံနဲ့ ဆွဲနိုင်တာပါ။ ဒီမှာတော့ ကျနော်တို့ Data Input ပေးတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး အနား အရေအတွက် “စုံ”ထားထား၊ “မ”ထားထား အောက်ခြေအနားက ရေပြင်ညီ ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာနော်။ ဥာဏ်ရှိသလို သုံးပါလေလို့ပဲ ပြောပါရစေတော့။ ကဲ . . . ဒါဆို ကြိုက်သလောက် အနားအရေအတွက်ထားပြီး Polygon တွေဆွဲနိုင်မှာပါ။
Posted by WISE GUY at 6:41 PM0comments Links to this post
E-05: Pipe Drafting & Design, Second Edition
Pipe Drafting & Design, Second Edition
Gulf Professional | ISBN: 0750674393 | English | 2002 Second Edition | PDF | 324 Pages | 27.3 MB
Piping Drawing ဆွဲနေတဲ့သူတွေနဲ့ လေ့လာချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီစာအုပ်က တထောင့်တနေရာက အထောက်အကူ ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်လို့ တင်ထားလိုက်ပါတယ်။ Manual ဆွဲတဲ့သူရော၊ Computer နဲ့ဆွဲတဲ့သူအတွက်ပါ အသုံးဝင်ပါတယ်။ Pipe အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးနဲ့ Fitting အမျိုးမျိုးအတွက်လည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Chapter တခုပြီးတိုင်းမှာ Review Quiz တွေ ထည့်ပေးထားလို့ ဖတ်ပြီးရင် ကိုယ်ဘယ်လောက်သိနားလည်တယ်ဆိုတာကိုလဲ ပြန်ဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်။ PNID (Piping and Instrumentation Diagram) တွေလဲပါတဲ့အတွက် လေ့လာလို့ ကောင်းပါတယ်။ PNID Codes တွေဟာ ကုမ္ပဏီတခုနဲ့တခု Assign လုပ်တာချင်းမတူပေမယ့် အခြေခံအားဖြင့်တော့ အတူတူပါပဲ။
Download : Pipe Drafting and Design, Second Edition
Posted by WISE GUY at 1:29 PM 1 comments Links to this post
3D-01: 3D မိတ်ဆက်
Mysteryzillion မှာတင်ခဲ့တဲ့ Post အဟောင်းလေးကို 3D မိတ်ဆက်အဖြစ်ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ မသိသေးတဲ့သူတွေ သိထားတော့ ကျနော်နဲ့အတူရှေ့ဆက်လေ့လာလို့ အဆင်ပြေနိုင်မယ် ထင်လို့ပါ။
AutoCAD 3D အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူများနေလို့ ကျနော် 3D အကြောင်း စတင်လိုက်တာပါ။ ကျနော် 2D ကိုလဲ တပြိုင်တည်း တင်ပေးသွားပါ့မယ်။ ကျနော်က AutoCAD Version 2008 ကို အခြေခံပြီး ရှင်းပြပေမယ့် AutoCAD Release 12 ကနေစပြီး ဒီ Tutorial က အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
အခု AutoCAD ထဲမှာ 3D စဆွဲတော့မယ် ဆိုရင် UCS (User Coordinate System) အကြောင်းကို အရင်ဆုံး နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ Default Setting အတိုင်းဆိုရင် Drawing Area ရဲ့ဘယ်ဖက် အောက်ထောင့်မှာရှိတဲ့ Icon လေးကို UCS Icon လို့ခေါ်ပါတယ်။
အောက်မှာပြထားသလို တခုမဟုတ်တခု မြင်ရမှာပါ။
နောက်ပိုင်း Version တွေမှာ ရှေ့က ပုံစံမျိုးမြင်ရပြီး အရင် Version တွေတုန်းကတော့ နောက်က ပုံစံမျိုးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါက ဘာကိုဖော်ပြသလဲ ဆိုရင် ကျနော်တို့ အခုမြင်နေရတဲ့ Screen Plane ဟာ Mechanical အရပြောရင် Top View, Civil နဲ့ Architecture အမြင်အရပြောရင် Plan View လို့ဆိုလိုပါတယ်။ AutoCAD ကတော့ Plan View လို့ပဲ သုံးပါတယ်။
ဒီ UCS Icon လေးကို ပြောင်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်
Menu: View > Display > UCS Icon > Properties . . .
Command: UCSICON, P ဆိုပြီး ၀င်လိုက်တဲ့အခါ UCS Icon Dialog Box ကို အခုလို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
UCS icon style မှာ 2D ကိုရွေးလိုက်ရင် အရင် Version အဟောင်းတွေ ကလိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ (Fig-01 ဒုတိယပုံ) “W” ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးက World Coordinate System (WCS) ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဆိုလိုတာက AutoCAD ရဲ့ Default Coordinate System ဟာ WCS ပါပဲ။ 2D ကိုရွေးလိုက်ရင် Cone နဲ့ Line width ဟာ Dimmed ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာက ရွေးချယ်စရာ မလိုတော့ ဘူးဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
3D ကိုရွေးတဲ့အခါမှာ Cone ကို Check လုပ်ထားရင် UCS Icon က မျှားခေါင်းလေးတွေဟာ ကတော့ပုံလေးနဲ့ မြင်ရမယ်။ Line Width အထူ၊ အပါးကိုလဲ ကိုယ်နှစ်သက်သလို 1, 2,3ရွေးလို့ရပါတယ်။ UCS icon size ကတော့ Default ဆိုရင် 12 ပါ။ ဒါကိုလဲ5ကနေ 95 အထိ စိတ်ကြိုက်ထားနိုင်ပါတယ်။ အလကားရတိုင်း အကြီးကြီးထားတော့လဲ မျက်စေ့နောက်တာပေါ့ဗျာ။UCS icon color မှာ Model Space နဲ့ Layout Space (Paper Space လို့လဲ ခေါ်ပါတယ်) နှစ်ခုစလုံး ကြိုက်တဲ့အရောင် ထားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် လုပ်ပြီးရင်တော့ OK Button လေးကိုသာ နှိပ်လိုက်ပါတော့။
တကယ်ကတော့ Default Setting က အကောင်းဆုံးပါပဲဗျာ . . . ။
ကျနော်တို့က 2D သက်သက်ပဲဆွဲမယ်၊ သုံးနေတာကလဲ XY Plane တခုပဲဆိုရင် ဒီ UCS Icon လေးကို ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်။ ပိတ်ထားမိလို့ ပြန်ဖွင့်ချင်ရင်လဲ ရပါတယ်။
Menu: View > Display > UCS Icon > On (Check or Uncheck)
Command: UCSICON, ON (or) OFF နဲ့ အဖွင့်၊ အပိတ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုပဲ UCS Icon ကို Origin မှာ ထားချင်၊ မထားချင်လဲ ရွေးချယ်လို့ ရပါတယ်။
Menu: View > Display > UCS Icon > Origin (Check or Uncheck)
Command: UCSICON, OR (or) N နဲ့ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Drawing Area ထဲမှာ Origin ကို မဖော်ပြနိုင်တဲ့အခါ၊ Noorigin ကို ရွေးထားတဲ့အခါတွေမှာတော့ UCS Icon ဟာ Drawing Area ရဲ့ ညာဖက်အောက်ထောင့်မှာ Default Setting အတိုင်း ရှိနေပါ လိမ့်မယ်။ Origin မှာရှိနေတဲ့အခါ UCS Icon ရဲ့ Origin မှာ Plus Sign လေးပေါ်နေတာ သတိထားမိမှာပါ။
UCS Icon အကြောင်းပြောတဲ့အခါ ကိုယ်လိုချင်သလို View Point လှည့်ကြည့်တတ်ဖို့၊ UCS ကို လှည့်တတ်ဖို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ 3D တွေဆွဲတဲ့အခါ Current XY Plane ကို Base Plane အဖြစ် ယူပြီးဆွဲရတာကိုး။ နောက်ပိုင်း Versions တွေမှာတော့ (AutoCAD Version 2007 ကစတယ် ထင်ပါတယ်) Dynamic UCS ပါလာတော့ လွယ်သလိုလိုရှိပေမယ့် UCS လှည့်တတ်ဖို့ကလဲ အရေးပါဆဲပဲ ရှိပါတယ်။
ကျနော်နဲ့အတူတူလေ့လာနိုင်ဖို့ အောက်က Drawing File လေးကို ပေးထားတဲ့ link ကနေ Download ချလိုက်ပါ။ AutoCAD 2000 ထိ အဆင်ပြေအောင် ချသိမ်းပေးထားပါတယ်။
Download: 3D-01 Ex-01.DWG
File ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ အထက်မှာ ပြထားသလို မြင်ရမှာပါ။ ဒါဟာ AutoCAD ရဲ့ Plan View အတိုင်း မြင်ရတဲ့ အနေအထားပါ။ View Point စလှည့်ကြည့်ရအောင် . . .
Menu: View > 3D Views > Viewpoint
Command: VPOINT (Enter)
Specifyaview point or [Rotate] <display compass and tripod>: (Enter)
ဆိုရင် အခုလို Compass and tripod ကိုမြင်ရမှာပါ။
XYZ Coordinate ကိုဖော်ပြနေတာက Tripod ဖြစ်ပါတယ်။ Circle နှစ်ခုနဲ့ပြတာက Compass ပါ။ Cross-hair သေးသေးလေးက ကျနော်တို့ မြင်လိုတဲ့ View Point ကို ရွေးချယ်ပေးမှာပါ။ စက်ဝိုင်းအသေးက အပေါ်ဖက်က ကြည့်မြင်မှာကို ကိုယ်စားပြုပြီး စက်ဝိုင်း နှစ်ခုကြားကတော့ အောက်ဖက်ကမြင်ရမှာပါ။ လေးပိုင်းစိတ်က ဘယ်၊ ညာ၊ ရှေ့၊ နောက်ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
ကျနော် ဒီလိုလေးရှင်းပြရင် ပိုကောင်းမယ် ထင်တယ် . . .
ကဲ . . . နောက်၊ ဘယ်၊ အပေါ် ကြည့်ကြရအောင် . . .
တခါတလေ ကိုယ်လိုသလို လှည့်ကြည့်တဲ့အခါ အပေါ်ကလား၊ အောက်ကလား မကွဲပြားဘူး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ Hide လုပ်ပြီး ကြည့်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
Menu: View > Hide
Command : Hide
ကဲ အခုမှ “ဟိုက်” ကနဲ တကယ်ဖြစ်ပြီ။ အကျိုးနည်းရချေရဲ့။ အောက်မှာပြသလို မြင်နေရပြီ မဟုတ်လား . . .
ဘယ်လိုမှ ကြည့်လို့ မကောင်းဘူးနော်။ ကိုယ်လဲ မဆွဲရပဲ ဘာလိုင်းတွေမှန်း မသိတာတွေလဲ မြင်ရရဲ့။ အ၀ိုင်းတွေကလဲ မ၀ိုင်းဘူး။ အတွန့်၊ အတွန့်တွေနဲ့။ Wise Guy တော့ အဆဲခံရတော့မယ်။ မြန်မြန်လေးရှင်းမှ . . . ။
ဘာမှန်းမသိ၊ ကိုယ်လဲမဆွဲပဲ မြင်နေရတဲ့ လိုင်းတွေကို မမြင်ချင်ရင် Silhouettes ကို အမှန်အတိုင်း မြင်ရဖို့ On ရပါမယ်။ အင်မတန်အသုံးရှားပါးတဲ့ English စာလုံးကိုမှ Autodesk ကသုံးထားပါတယ်ခင်ဗျား . . .
Menu: Tools > Options . . . ထဲဝင်လိုက်တဲ့အခါ Options Dialog Box ကိုအခုလို တွေ့ရပါလိမ့်မယ် . . . Display Tab မဟုတ်ရင် အပေါ်က Display Tab ကိုသွားလိုက်ပါဦး။
ပုံမှာ 1 ပြထားတဲ့နေရာက Draw true silhouettes for solids and surfaces options ကို Check လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် OK ပေးပြီး ပြန် Hide လုပ်ကြည့်ပါ။ ကြည့် . . . သိပ်မကျေနပ်နိုင်သေးဘူးမဟုတ်လား။ ဟိုလိုင်းတွေ ပျောက်သွားတာတော့ ဟုတ်ပါရဲ့။ အတွန့်တွေက ရှိတုန်းပဲ ပြောချင်နေတာလား။ တစ်ခါ Options ထဲကို ပြန်သွားပါအုန်း ခင်ဗျား။
ဒီတခါတော့2ပြထားတဲ့နေရာက Rendered object smothness ကိုတင်ကြရအောင်။ များလေ ကောင်းလေဆိုပေမယ့် 0.01 ကနေ 10 အထိပဲ ရပါတယ်။ ကဲ . . . အမြင့်ဆုံး 10 အထိပဲ မြန်မာပီပီ တင်လိုက်ရအောင် . . . ။ ပြီးရင် OK ပေးပြီး ပြန် Hideလုပ်ကြည့် ပါအုန်း။
ကျေနပ်သွားပြီ မဟုတ်လား။ ဒီလိုလေး မြင်ရမှာကိုး . . .
Command Line သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ . . .
Draw true silhouettes for solids and surfaces options က DISPSILH (Display Silhouettes) , ON/OFF or 0, 1 နဲ့သုံးနိုင်သလို . . .
Rendered object smothness က FACETRES (Facet Resolutions) ကို 0.01 ကနေ 10 အထိပေးနိုင်ပါတယ်။
ကဲ . . . ကျနော် အောက်မှာပြထားသလိုလေးတွေ ကြိုးစားပြီး လှည့်ကြည့်လိုက်ပါအုန်း။
ကျနော်လှည့်ပြထားသလိုရရင် ခင်ဗျားလူလည်ဖြစ်သွားပြီလို့ မှတ်ပေတော့ဗျို့ . . . ။
ကဲ . . . Command Line ဘက်က အသုံးချတာကို 3D မိတ်ဆက် (၂) မှာ ဆက်ဖတ်ပါခင်ဗျား . . . ။
Posted by WISE GUY at 1:01 AM0comments Links to this post
E-04: Geometric and Engineering Drawing, Second Edition
Butterworth-Heinemann 270 pages English 1974 ISBN: 0713133198 PDF 7.6 MB
ကျနော်တို့ Computer Software တွေ အသုံးချပြီး Drawings တွေဆွဲတဲ့အခါ တခါတလေမှာ ကိုယ်သိထားတဲ့ Geometric Idea တွေက အသုံးကျနေတာကို သတိထားမိမှာပါ။ ဒီစာအုပ်ကတော့ Computer နဲ့ဆွဲတဲ့သူရော၊ Manual ဆွဲတဲ့သူပါ အသုံးကျလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် Drawing ကို “စ”လေ့လာနေတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် ပိုအသုံးဝင်မယ် ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။
Download: Geometric and Engineering Drawing, Second Edition
Posted by WISE GUY at 12:03 AM 1 comments Links to this post
T3D-01: 3D Threaded Bolt ဆွဲကြရအောင်
ကျနော်အမြဲတန်း ကြုံတွေ့ရတဲ့မေးခွန်းကတော့ Mechanical သမားတွေက Screw Thread ဆွဲချင်တယ်၊ Civil သမားတွေက ကြောင်လိမ်လှေခါးဆွဲချင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ အရင် Version (Release) အနိမ့်တွေတုန်းက မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ ရပါပြီ။ တကယ်တော့ Mechanical Drawing မှာ Threaded Drawing တွေ စက္ကူပေါ်မှာ ဆွဲကတည်းက Assumpltion တွေ အများကြီးနဲ့ပါ။ Drawing စာအုပ်တွေထဲမှာ ပြန်လေ့လာကြည့်ပါ။ ဆိုတော့ . . . ဘယ်လိုမှတော့ Realistic ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီ Tutorial လေးကို လေ့လာကြည့်ရင် စိတ်တော့ အဆာပြေ ကောင်းပါရဲ့လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ နောက်တော့မှ ကြောင်လိမ်လှေခါးဆွဲတာ တင်ပေးပါ့မယ်။ ဒီ Tutorial ကနေ ဥာဏ်ကွန့်ပြီး ဆွဲမယ်ဆိုလဲဆွဲနိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Screw ကိုကြည့်ရင် အားလုံးပေါင်းအလျား ၃” ရှိတယ်နော်။ ကဲ အရစ်စိန်တို့ ရစ်လိုက်ကြရအောင် . . .
ပထမဦးဆုံး AutoCAD ထဲမှာ New Drawing တခုကို စဖွင့်ပါ့မယ်။ acad.dwt ပဲ Template ယူပါ့မယ်။ ပြီးရင် ကျနော်အောက်မှာ ဖော်ပြထားသလို PLINE နဲ့ Close Polygon တခုဆွဲပါ။
ကျနော်နဲ့အတူတူလိုက်ဆွဲရင် ကျနော်ကတော့ လွယ်တာတွေပဲ ပြောပါ့မယ်။ Command Line, Menu, Toolbar ဆိုပြီး ခွဲပြောနေ တော့မှာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ခင်ဗျား ကျွမ်းကျင်သလို အသုံးချသွားလည်း ရပါတယ် . . . ။
Polygon ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင် . . .
Command: PLINE (Enter)
Specify start point: တနေရာရာမှာ Click ပေးလိုက်ပါ။ (ကျနော်က Lower Right End ကစဆွဲမှာပါ။)
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @-3,0 (Enter)
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @0,3/16 (Enter)
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @1/2,0 (Enter)
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @1/4,-1/16 (Enter)
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @2,0 (Enter)
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: c (Enter)
ပြီးရင် REVOLVE နဲ့ Solid Model လုပ်ကြရအောင်။ ဒီနေရာမှာ Revolve Axis ကို အောက်မှာအနီနဲ့ပြထားတဲ့ Line ကို ရွေးပါ့မယ်။
Command: REVOLVE (Enter)
Select objects to revolve: ကျနော်တို့ရဲ့ Polygon ကို ရွေးလိုက်ပါ။
Select objects to revolve: (Enter)
Specify axis start point or define axis by [Object/X/Y/Z] <Object>: အနီရောင်ပြထားတဲ့လိုင်းရဲ့ End တဘက်ကို ရွေးပါ။ (Osnap ကိုလိုသလိုသုံးပါ)
Specify axis endpoint: အနီရောင်လိုင်းရဲ့ ကျန် End တဘက်ကို ရွေးပါ။
Specify angle of revolution or [STart angle] <360>: (Enter) တပတ်လုံးပတ်ခိုင်းမှာပါ။
Command: ISOLINES (Enter)
Enter new value for ISOLINES <8>: 16 (Enter)
Command: REGEN (Enter)
REGEN Regenerating model.
ဒါဆိုရင် Fig-04 ပြထားသလို မြင်ရမှာပါ။
View> 3D Views > SW Isometric ကိုဝင်လိုက်ရင် အခုလိုတွေ့နေရပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့အလိုရှိသလို ဆွဲနိုင်ဖို့ XY Coordinate ကိုပြောင်းကြရလိမ့်မယ်။ AutoCAD က XY Plane ကို Base Plane ထားဆွဲလို့ပါ။
Tools> New UCS> Face နဲ့ Fig-06 မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းUCS ကိုရအောင် ပြောင်းလိုက်ပါ။ လိုအပ်ရင် Next/Xflip/Yflip တွေသုံးရပါလိမ့်မယ်။ အလိုရှိသလိုရရင် Accept လုပ်လိုက်ပါတော့ . . . ။
ကျနော်တို့ Bolt Head ဆွဲဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်တာပါ။
Enter number of sides <4>:6(Enter)
Specify center of polygon or [Edge]: အစွန်ဆုံး Circle တနည်း XY Zero Plane မှာရှိတဲ့ Circle ရဲ့ Center ကိုယူပါ။
Specify radius of circle: 9/32 (Enter)
ပြီးတော့ Solid ဖြစ်သွားအောင် Extrude ပစ်လိုက်ရအောင် . . .
Command: EXTRUDE (Enter)
Current wire frame density: ISOLINES=16
Select objects to extrude: Hexagon ကို ရွေးလိုက်ပါ။
Select objects to extrude: (Enter)
Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle] <0.2500>: -0.25 (Enter)
Minus ပါတာက Z Negative Direction ဘက်ကို သွားစေချင်လို့ပါ။ ဒါမှ Dimension 3” မှန်ပါလိမ့်မယ်။
Bolt မှာ Chamfer ဇောင်းသိမ်းဖို့အတွက် ဆက်လိုက်ရအောင် . . .
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: အစွန်ဆုံး Circle တနည်း XY Zero Plane မှာရှိတဲ့ Circle ရဲ့ Center ကိုယူပါ။
Specify radius of circle or [Diameter] <0.1803>: 9/32 (Enter)
အခုဆိုရင် Fig-07 မှာ ပြထားသလို တွေ့နေရပြီနော်။
ဒီ Circle လေးကို Chamfer ဇောင်းသိမ်းဖို့အတွက် Extrude ပစ်ပါ့မယ်။
Select objects to extrude: စောစောကဆွဲထားတဲ့ Circle ကိုရွေးလိုက်ပါ။
Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle] <-0.2500>: T (Taper angle Option ကိုရွေးလိုက်တာပါ။)
Specify angle of taper for extrusion <315>: -45
Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle] <-0.2500>: -0.5 (Z Negative Direction ဘက်ကို သွားစေချင်လို့ပါ။)
ကဲ အခု Fig-08 မှာပြထားသလို မြင်နေရပြီနော်။
အခုအချိန်မှာ ဒီ Solid ကို စောစောက Extrude လုပ်ထားတဲ့ Solid Hexagon နဲ့ INTERSECT လုပ်လိုက်ပါ။
Command: INTERSECT (Enter)
Select objects: Solid Hexagon or Taper Extruded Circle တခုခုကိုရွေးပါ။
Select objects: နောက်တခုကိုရွေးပါ။
Select objects: (Enter) ဆိုရင် Fig-09 မှာပြထားသလို မြင်ရတော့ ကျေနပ်မှာပါ။
ကျနော် Fig-10 မှာပြထားတာကတော့ Conceptual View နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ View> Visual Styles> Conceptual နဲ့ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
တခါ Thread ရစ်ဖို့ လမ်းကြောင်းပေးလိုက်ရအောင်။
Command: HELIX (Enter)
Number of turns = 3.0000 Twist=CCW
Specify center point of base: Bold Head မဟုတ်တဲ့ထိပ်ဖျားဘက်က Circle ရဲ့ Center ကိုရွေးပါ။
Specify base radius or [Diameter] <1.0000>: အဲဒီ Circle ရဲ့ Quadrant ကိုပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
Specify top radius or [Diameter] <0.1250>: (Enter) တခါပေးဖူးထားလို့ 0.125 ဆိုပြီး Default မှာတွေ့နေရပြီ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Base နဲ့ Top radius ဟာအတူတူပဲ ထားတာများပါတယ်။
Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] <1.0000>: T (ဘယ်နှစ်ရစ် ရစ်မလဲဆိုတာ ပြောင်းချင်လို့ Option ပြောင်းတာပါ။)
Enter number of turns <3.0000>: 14 (Enter)
Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] <1.0000>: A (Enter)
Specify axis end point: Bold Head ဘက်က Circle ရဲ့ Center ကိုပေးလိုက်ပါ။ ပထမ Circle ရဲ့ Center ကို First Point လို့မှတ်ထားတဲ့အတွက် ဒုတိယ End Point ပဲတောင်းတာပါ။ အခုဆိုရင် Fig-11 မှာပြသလို တွေ့နေရပြီလေ။
Thread ရစ်ဖို့ Triangle တခုဆွဲချင်တာ UCS ပြောင်းရလိမ့်အုန်းမယ်။ လွယ်တာကတော့ . . .
Command: UCS (Enter)
<World>: (Enter) နဲ့ World ပြန်ချလိုက်တာ အလွယ်ဆုံးပါပဲ။
ကျနော်ကတော့ UCS ကိုပြလို့ကောင်းအောင် အခုလိုနေရာရွေ့လိုက်ပေမယ့် မလိုအပ်ပါဘူး။
<World>: M (Enter)
Specify new origin point or [Zdepth]<0,0,0>: ထိပ်အချွန်ရဲ့ End ကိုရွေးလိုက်ပါ။
ဆက်ဆွဲရအောင် . . .
Enter number of sides <6>:3(Enter)
Specify center of polygon or [Edge]: ထိပ်အချွန်ဘက်က Circle ရဲ့ Quadrant ကိုရွေးပါ။
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <C>: I (Enter)
Specify radius of circle: 1/16 (Enter)
Command: ROTATE (Enter)
Select objects: L (နောက်ဆုံးဆွဲထားတာမှန်းသိလို့ လွယ်လွယ်ရွေးခိုင်းလိုက်တာပါ။)
Specify base point: စောစောက Triangle ရဲ့ Center ယူခဲ့တဲ့ Quadrant ကိုပဲ ပြန်ယူလိုက်ပါ။
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: 180 (Enter)
အခုဆိုရင် Fig-12 မှာပြထားသလို အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာ တွေ့ရမှာပါ။
တကယ်လို့ Plan View မှာကြည့်ရင် Fig-13 မှာလို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကဲ . . . ရစ်ပြီနော်။ ကိုအရစ်၊ မအရစ်တို့ရေ . . .
Command: SWEEP (Enter)
Select objects to sweep: Triangle ကိုရွေးပါ။
Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]: A (Enter)
Align sweep object perpendicular to path before sweep [Yes/No]<Yes>: N (Enter)
Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]: Helix ကိုရွေးပါ။
ကဲ အားလုံးပြီးရင် UNION သာလုပ်ချလိုက်ပေတော့ . . . ။
ဒါဆိုရင် Fig-14 မှာပြထားသလို တွေ့ရပြီနော် . . . ။ Conceptual View နဲ့ပေါ့။
Engineering Point of View ကကြည့်ရင် Thread ရဲ့ထိပ်ဘက်တွေကို စိတ်တိုင်းမကျနိုင် သေးဘူးလေ။ ကဲ . . . ဒါတော့ သင်ဥာဏ်ရှိသလို လုပ်ပါတော့လို့ပဲ ပြောပါရစေ။ ဗျာ . . . ဘာစားမှ မချန်ပါဘူး။ သိချင်လို့ မေးရင် ပြောပြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် တချို့ကျတော့လဲ ကိုယ့်ဖာသာ အားထုတ်ချင်ကြတယ်လေ။ ကျနော်က အခြေခံလေး ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ ဒီလိုလူတွေ စားဖို့ ချန်ခဲ့တာကို နားလည်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကိုအရစ်၊ မအရစ်တို့ ကျေနပ်နိုင်ကြပါစေ . . . ။
“အားလုံး ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ” ခင်ဗျား . . . ။
( http://www.ellenfinkelstein.com/autocadtips/AutoCAD_tips_draw_3d_threaded_bolt.html?rss ကိုမှီငြမ်းပါတယ်။)
Posted by WISE GUY at 1:03 AM2comments Links to this post
2D-04: Basic Drawing Commands (Rectangle, Circle, ...
E-04: Geometric and Engineering Drawing, Second Ed...
E-03: Introduction to AutoCAD 2010 by Alf Yarwood
E-02: AutoCAD: Secrets Every User Should Know
E-01: Learning AutoCAD 2010 and AutoCAD LT 2010 (2...
TT-01: နောက်မှာပုန်းနေတဲ့ System Variables တွေ . ....
AutoCAD ကိုလိုချင်ရင် ...
2D-03: AutoCAD Basic Concept & Data Input
2D-02: AutoCAD Setting (Limits, Units, Snap, Grid)...
2D-01: AutoCAD မိတ်ဆက်
AutoCAD Release (Version) History
တောင်းပန်ပါရစေ . . .